Fiaraha-miasa amin’ny fitondrana :: Mpandraharaha frantsay am-polony hampiasa ny volany eto Madagasikara • AoRaha
Fiaraha-miasa amin’ny fitondrana Mpandraharaha frantsay am-polony hampiasa ny volany eto Madagasikara
Tsy manaiky ho diso anjara. Hanao be fiavy hampiasa ny volany eto Madagasikara ireo mpandraharaha frantsay mi­vondrona ao anatin’ilay hetsika ho an’ny fampiro­boroboana orinasa any Frantsa (Medef), tarihin’i Momar Nguer . Nisy ny fihao­nana manokana teo amin’izy ireo sy ny Praimi­nisitra Ntsay Christian teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo, ny fiandohan’ny herinandro teo. Nivoitra tao anatin’ity fihaonana ity ny fitiliana sy ny fijerena amin’ny antsipiriany ireo sehatr’asa sy sehatra ara-barotra hahafahan’ireto mpan­­draharaha ireto mampiasa ny volany eto amintsika.
Nisy, araka izany, ny fihao­nan’izy ireo tamin’ireo mini­sitra eo anivon’ny gover­ne­manta nijerena izany sehatr’asa izany. Fantatra fa mahaliana an’ireto mpandraharaha vahiny ireto ny ham­piasa vola eo amin’ny sehatry ny fampiroboroboana ny famokarana angovo, ny indostria, ny fahasalamam-bahoaka, ny fananganana tanàna vaovao ary ny tan-tso­roka ho an’ireo orinasa madinika. Ho fanatanterahana an’izay fiaraha-miasa izay dia mbola hisy ny fihaonana manokana eo amin’izy ireo sy ny mpikambana ao anatin’ ny governemanta.
Manoloana izany dia nanome toky an’ireto mpandraharaha ireto ny Praimini­sitra fa hametraka an’ireo lamina rehetra hahafahan’izy ireo mampiasa ny volany eto amintsika. “Hotanterahina haingana ny fiaraha-miasa izay heverina fa hitondra tombontsoa iombonana, na ho an’ny firenena izany na ho an’ny vahoaka, na koa ho an’ ireo mpampiasa vola”, hoy ny Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian izay sady mitana vonjimaika ny toeran’ ny minisitry ny Raharahambahiny.
Araka izany, mety ho isan’ireo handray anjara amin’ ny fanorenana an’ireo tanàna vaovao hatsangana eto amintsika ireto mpandraharaha frantsay ireto. Nitarika an’ity delegasionan’ny Medef ity teny an-toerana ny maso­ivohon’i Frantsa, Christophe Bouchard.
Boriborintany fahadimy :: Fokontany dimy indray no notsidihin’ny kandidà Naina Andriantsitohaina